Auschwitz raibhurari, mumwe muono wevasungwa | Zvazvino Zvinyorwa
Iye Auschwitz Raibhurari
Iye Auschwitz Raibhurari (2012) inhoroondo yenhoroondo nemunyori wechiSpanish uye mutori wenhau Antonio González Iturbe. Inorondedzera kuita kwakaitwa naDita Adlerova, uyo, paakange asina makore gumi nemana ekuberekwa, akazova gamba retsika pakati pemusasa wevasungwa weAuschwitz, Poland.
Musikana uyu akapa mabhuku kuvana vebato 31 uye akagadzira - panhungamiro yemukuru wedhipatimendi iri, Fredy Hirsch - nzvimbo yepachivande yekudzidzisa. Naizvozvo, inomiririra nyaya inofamba pamusoro pekupokana kwevanhu kukunda kutyisa kweNazi. Hazvishamisi kuti zita iri rakashandurwa mumitauro 31 uye rakahwina mibairo yakasiyana siyana yenyika neepasi rose.
2 Pfupiso yeThe Librarian yeAuschwitz
3 Kukosha kwebasa
3.1 Ruremekedzo kune vakaurayiwa nemabhuku
4 Kuongorora kweThe Librarian weAuschwitz
4.1 Iyo nhoroondo yenhoroondo
4.2 Madingindira erungano
4.3 Tariro uye kuda
Antonio González Iturbe akaberekerwa muZaragoza, Spain, muna 1967. Akapedza huduku hwake nehudiki muBarcelona, ​​kwaakadzidza Information Sayenzi. Asati apedza kudzidza muna 1991, Akashanda mumabasa akasiyana siyana: kubva kubheka kusvika kumubatsiri wenhau kuterevhizheni yemuno kuti azvitsigire uye apedze zvidzidzo zvake.
Mushure mekupedza kudzidza, akashanda semupepeti uye mupepeti-mukuru-wemagazini uye zvinyorwa zvine chekuita nerunyorwa uye hunyanzvi nzvimbo. Akaitawo basa rekuparadzira tsika mune zvekuwedzera zvezuva nezuva senge La Vanguardia. Nhasi, ndiye director wemagazini Bhuku rekambasikunze kwekuve mudzidzisi kuYunivhesiti yeBarcelona uye kuAustonomous University yeMadrid.
Nhau ina, zvinyorwa zviviri uye gumi nemanomwe mabhuku evana (akapatsanurwa kuita maviri akateedzana) ndiwo mukwende wezvinyorwa zvaAntonio González Iturbe. Rwendo rwakatangwa narwo Yakarurama Yakamonyoroka (2004), bhuku rake rekutanga, raakapihwa kuzivikanwa. Kunyangwe, pasina kupokana, rake rinozivikanwa basa uye neakanakisa ekugadzirisa manhamba ave Iye Auschwitz Raibhurari.
Pfupiso ye Iye Auschwitz Raibhurari
Mumusasa wevasungwa uye kuparadzwa kwe Auschwitz, muJudha wechiGerman anonzi Fredy Hirsch, anogadzwa kuti atarisire dzimba dzemauto 31, uko kune vana. Kunyangwe kurambidzwa kwakazara kwevaNazi, Hirsch nguva dzose vaive nechishuwo chekugadzira chikoro chepachivande. Zviripachena, raive risiri basa rakareruka, nekuti zvinyorwa zvezvidzidzo, zvechitendero kana zvematongerwo enyika zvakarambidzwa zvachose.
Gare gare, mudiki Dita Adlerova akasvika pakamba yevasungwa, uyo, pazera remakore gumi nemana, akabvuma kubatsira semuraibhurari.. Kune rimwe divi, hupenyu hwezuva nezuva munzvimbo iyoyo inotyisa hungangove dambudziko. Sezvo rangano rinofambira mberi, nyaya dzinotyisa uye dzinosuruvarisa dzinotaurwa. Asi paive zvakare nenzvimbo yerudo (semuenzaniso, pakati pemusoja weNazi nemukadzi wechidiki wechiJuda).
Raibhurari ye ...
Dita anotanga basa rake raibhurari kwegore. Munguva iyoyo anoramba akavanda (dzimwe nguva mukati mehembe yake) mabhuku masere chete imomo, pakati pawo pane vanyori vakaita saHG Wells kana Freud. Saka, Adlerova anokunda kutya kuburikidza nekuzvipira kurusununguko. Pamwe, mudiki raibhurari aisaziva kana aizozviita kuti ibude muAuschwitz ari mupenyu.
Kunyangwe zvakadaro, wechidiki protagonist anoshanda kuchengetedza raibhurari diki asingafunge zvakawanda nezvake. Gare gare, kuendeswa kwake kuBergen-Belsen - iyo imwechete kwaakafira typhus yakaziviswa Anne chokwadi- kuGerman. Gare gare, Kufa kwaHirsch kunoitika uye Dita anosangana nemukurumbira Dr. Mengele (inozivikanwa nekuyedza nemaJuda). Pakupedzisira, akasunungurwa Hondo yapera.
Kunyangwe yanga yave nguva yakareba kubvira kudonha kwevaNazi muna 1945, uye pasi rakachinja zvakanyanya kubva ipapo, iro dambudziko revanhu richiripo. Sezvinei, la Shoah, chirevo chinoreva "njodzi", Izvo hazviratidzi chete inoshamisa nhamba yekufa, asi kusimudzirwa kwehuipi hwevanhu. Neichi chikonzero, zvinyorwa zvadzo zvakagadzirisa zvakare zvakaitika kuti zvichengetedze ndangariro.
Zvechokwadi, pakutora nyaya yakaitika mumisasa yevasungwa, Iye Auschwitz Raibhurari iri kutumira shoko kunzanga: “rangarira". Naizvozvo, munyori waro anozivisa huchokwadi hwenyaya iyi inomiririra kurwadziwa kunorarama kunyangwe kuEurope nekuMadokero.
Ruremekedzo kune vakaurayiwa nemabhuku
Nezve izvo zvinoreva izvo zvakapihwa inovairi, hunhu hwavo hwechipupuriro hunonyanya kukosheswa. Nenzira imwecheteyo, zvakave zvichizivikanwa murondedzero yake yechokwadi nezve zvakaitika mumisasa yevasungwa yeNazi. Panguva imwecheteyo, iri bhuku mutero kune vakaurayiwa uye kuongororwa kwesimba revaya vakatambura neNazi.
Uyezve, chinhu chinonyanya kukurudzira chinowoneka --Zvose zvemunyori, nezvevaverengi-- Simba remabhuku. Izvi zvinokodzera, muchidimbu, kuIturbe yakaziviswa rudo rwemaraibhurari, nekuti nenzira iyi akawana nyaya yaDita Kraus (murume akaroora we protagonist).
Kuongorora kweThe Librarian weAuschwitz
Iyo nhoroondo yenhoroondo
Kurondedzerwa kwakashata uye kwakadzama kunosanganisira zvimwe zvekufungidzira, asi nyaya yacho yese yakavakirwa pazviitiko chaizvo.. Mune ino chinyorwa, protagonist inokunda muverengi neushingi hwake uye anokwanisa kurarama. Parizvino, Dita anogara muIsrael, chirikadzi yemunyori Otto Kraus (waakaroora naye kwemakore makumi mashanu nemana).
Ukuwo, fungidziro iriko munoverengeka yakaderedzwa kuita yemubatanidzwa kana hunhu musanganiswa, asi hapana chidimbu chinonyeperwa kana kuwedzeredzwa. Muchokwadi, anenge ese mazita, mazuva, nzvimbo uye mareferenzi akavimbika. Iyo yekupedzisira yakasimbiswa naDita Kraus pachake mubvunzurudzo paakadzidza nezve yepamusoro-mutengesi chiyero chaakachipa Amazon.
Mune yenhoroondo inoverengeka nezve Hondo Yenyika II (kana nezve chero hondo inogara kwenguva refu), dingindira redambudziko revanhu rinowanzo kuve pakati pechirongwa. Asi izvi hazvisizvo Iye Auschwitz Raibhurari. Asi iyo inotarisa inowira padanho umo kuratidzwa kweushingi kunoitwa neavanhu vakatsanangurwa kwakaitika.
Dingindira rehuipi hwevanhu nderekuyambuka, asi madingindira ayo Iturbe inoda kukwidziridza nekutaurirana akasiyana. Zvisinei, Mukutarisana nehutsinye hwakawanda nerufu, iwe unogona chete kudarika nechakarumbidzwa kuda. Muchirevo ichi, Fredy Hirsch ndiye hunhu hweushingi apo Dita anomiririra kuzvipira; ese anomiririra tariro.
Tariro uye kuda
Iye Auschwitz Raibhurari iri ode kune hunhu hwevanhu uye hunhu hunogona kubuda mune yakaipisisa mamiriro. Nekuti, kutaura chokwadi, hapana kumboguma kunofadza muhondo. Idzo mhando dzekuvharwa dzinongova nenzvimbo muHollywood mafirimu; Hupenyu chaihwo ndechimwe chinhu.
Mushure mekupokana kwakakura kudaro, vapukunyuki chete, vanhu vakasiya misha, matongo uye kurwadziwa ndizvo zvinosara. Chero zvazviri, zvapupu zvichagara zvichikwanisa kuyambira yemberi zvizvarwa kudzivirira avo vanobatwa uye zviitiko kubva mukuwira mukukanganwa ... Ndiyo nzira yakanakisa yekukudza vakawa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Iye Auschwitz Raibhurari